musha FOOTBALL MANAGER Carlo Ancelotti Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; 'Carletto'. Our Carlo Ancelotti Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye zvishoma-kuzivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvehutungamiri hwake huripo asi vashomanana vanoona Carlo Ancelotti's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Carlo Ancelotti Utano Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts: -Upenyu Hwekutanga
Carlo Ancelotti akaberekwa musi we 10th waJune 1959 kuna Mr naMi Giuseppe Ancelotti vakange vari varimi vechiCheese. Akakurira muRéggiolo iyo inharaunda yekumaruwa yekurima yekumaruwa mumoyo weNorthern Italy. Guta iri nzarakwete kwete chete parmesan cheese yayo asi kune imwe shanho-kusimudzirwa pasi-kambani yemutambo uye maneja muzita raCarlo Ancelotti.
Akanga aine nguva dzose, unhu hwake hunofadza kubva paudiki hwake nguva. Carlo Ancelotti achiri kukura akatora baba vake. Baba vake Giuseppe aiva mumwe munhu ari nyore kuwirirana uye kunyanya pasi pasi. Akapa Carlo unhu hwakatendeseka uye hwetsika hwekuItaly.
Mazhinji emakore ake achiri muduku akanga apedza kushanda purazi nababa vake, amai nehanzvadzi. Carlo akakura achizvidzivirira kubasa rakaoma-nekuraira kubva kuvabereki vake nevadzidzisi.
Paakanga achikura, akavhunduswa nechimwe chinhu. Ichokwadi chokuti 'Kukura kwakanga kusina kukwana kukwidza mhuri yake paurombo'. Izvi zvakaita kuti pave nekushandura mukutsvaka kwake kusarudza zvaaizova mune ramangwana.
Carlo Ancelotti Utano Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts: -Chisarudzo chekuva Mutambi
Kubvira achiri muduku, akava nechinangwa chokuita chimwe chinhu chehupenyu hwake mushure mokucherechedza baba vake namai vevaranda zuva rega rega, vachishanda varimi vavo nyika yeCheese kuti vawane mubayiro muduku. Ichi ndicho chikonzero akasarudza kutanga basa mumutambo.
Muhurukuro, Carlo Ancelotti akati; "Bhora haisi basa chete. Ndakakurira purazi, bhora rehupenyu huri nani. " Icho chaive chikwata chaAncelotti kuti ave chimwe chinhu chakamutora kubva purazi kuenda kuReggiolo youth team, kwaakaonekwa Parma uye yakanamatira.
Nokudaro, kurota kwemukomana wenyika uyo akabata denga nebhora rakagadzirwa.
Carlo Ancelotti Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Kuchinja kune Upenyu Hwakasiyana
Zvakanga zvichishamisa kumusikana muduku Carlo achibva kuguta rakagadzikana rekurima yekumaruwa yehuduku hwake kusvika kuguta guru rinoputika rose mukutsvaga kwebhola. Akashandura sezvaaizoita kakawanda kakawanda mune ramangwana. Carlo akazviona semukomana muduku aikwanisa kurarama nekufema bhora. Akanga ari munyatsoteerera uye anoteerera uye mudzidzi akatora nguva yake kutarisa uye kudzidza kubva kune vatambi vakuru.
Ancelotti aizobva pakuve achitya 15-year-old kusvika kuItaly icon, achikunda Scudetto uye mana Coppa Italia Roma, kuti ave chikamu cheboka iroro reMilan, rakapiwa naArrigo Sacchi - boka rekupedzisira kuti riwane mbiri dzakatevedzana dzeAfrica Cups.
Young Carlo akanga ari nyenyedzi huru mu AC Milan.
Mutevedzeri weParma, AS Roma neA AC Milan, akabatsira Roma kukunda musoro we 1983 Serie A nemakumbo mana eItaly vasati vasangana ne AC Milan mu1986 uko akawedzera mamwe makwikwi emakwikwi, uyewo kudzoka shure kweEurope Cup kukunda mu 1989 uye 1990.
Muchina, Ancelotti anotanga kudzidzisa. Anoendesa mberi kuSerie A neRefgiana, anotora danho kusvika Juventus uye kuA AC Milan, kubva kwaanoenda kuAbramovich's Chelsea vasati vasangana neAl Khelaifi's PSG. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Carlo Ancelotti Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Wati wambosangana nemusikana weCentral Coach waCarlo Ancelotti here? zvichida kwete, kwete Luisa, mudzimai wake waimbova mudzimai uye kwete Marine Cretu kana ari iye akazova musikana.
Ancelotti parizvino ari kufambidzana nemasikirwo anoshamisa anonzi Mariann Barrena McClay. Pasi pane mufananidzo unoshamisa wemukadzi wake weChitana anopisa.
Anoda Carlo zvikuru nokuti zvinonakidza kuva naye. Pasi pane mufananidzo wavo vanoenda kuOktoberfest (Oktoberfest ndiyo huru yeVolksfest yenyika. Inobata gore rimwe nerimwe muMunich, Bavaria, Germany).
Mariann akaberekerwa muVancouver, Canada kuMaría Concepción Gutiérrez uye Antonio Barrena. Akanyatsodzidziswa. Anobata MBA muKutengesa kubva ku Thunderbird School ye Global Marketing, MBA in international business uye Ph.D., muZimbabwe kubva kuCass Business. Anobatawo BBA mumabhizimisi ekutungamira kubva Simon Fraser University.
Aimbova mutariri pa Barclays Bhandi muLondon apo muna 2011 akasangana naCarlo Ancelotti uyo aishanda neCentrena panguva iyoyo. Ancelotti naBarna McClay vakaroorwa muVancouver muna July 2014.
Aw! Vanotarisa vakafara uye hatizivi kuti mwana wavo aripi panguva iyoyo. Yaiva mhirizhonga yavo yechipiri kune vose vari vaviri uye Mariann ane mwanasikana akaisvonaka zvikuru, Chloe McClay.
Pamberi pake, Carlo akaroora mudzimai wake Luisa kwemakore makumi maviri. Meer kutarisa mifananidzo yavo iri pasi, chimwe chinhu chinowanzoitika. Carlo zvirokwazvo ane ziso kune vakadzi vakanaka.
Mushure mekuparadzaniswa naLuisa, iye akashandura marita Marina Cretu ane makore gumi nemana anopfuura iye. Ancelotti uye x-mudzimai wake Luisa Gibellini vane mbiri vana David, uyo ari mutevedzeri wemutambo we Real Real. Kungofanana naHarry Redknapp, Steve Bruce uye Zinedine Zidane vakapa vana vavo mikana mubhoza, Carlo Ancelotti akaitawo zvimwechetezvo. Akambosarudza mwanakomana wake asina ruzivo, David saBayern Munich mubatsiri wechirungu paakanga ari paAllianz Arena.
Carlo Ancelotti ane mwanasikana anonzi Katia kubva kumukadzi wake wekare. Pasi pane mufananidzo wekutarisa Katia nababa vake.
Katia ndiye mwana wake wokutanga nemwanasikana, akaberekwa musi we 18th yaApril 1984. Akaroorwa muna 2014 kune waaishanda naye, Mino Fulco.
Carlo Ancelotti Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Upenyu hwehupenyu
Carlo ane unhu hunotevera kumunhu hwake.
Carlo Ancelotti's Strengths: Iye munyoro, rudo, anogadziriswa, anokwanisa kudzidza nekukurumidza uye kugovana pfungwa
Unyoro hwaCarlo Ancelotti: Anogona kuva nekutya, kusawirirana uye kusagadzikana.
Chii Carlo Ancelotti anoda: Mimhanzi, mabhuku, magazini, anotaurirana neanenge chero ani zvake uye ane mafupiso marefu pedo neguta kana taundi raanoshanyira.
Chii Carlo Ancelotti asingadi: Kuva wega, kuvharirwa, kudzokorora uye tsika.
Chaizvoizvo, Carlo akanyanya kufadzwa nenyika yake. Anowanzova nemanzwiro anoramba achiita kuti hapana nguva yakakwana yekuwana zvose zvaanoda kuona.
Carlo Ancelotti Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Anoputa
Chimwe chinhu chinouya sechinhu chisina kuitika ndechekuti paakambosungirira zvikwama zvake semutambi, Carlo akatanga kusvuta izvo kusvikira zuva richiramba richifamba muupenyu hwake. Iwe, anotaura kuti pane imwe nguva.
Apo yakabvunzwa munguva ichangopfuura, "Carletto" (sezvaanonzi anoratidzirwa nevemhuri yake) zvakasimba akataura izvo "Ari kuedza kurega".
Carlo Ancelotti Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Kuruboshwe Kwake Eye
Pashure pekuparara kweVespa paaiva achiri kuyaruka, Carlo akasiya jira rakasiyiwa rakasimba. Dzimwe nguva anovhara ziso rake rokurudyi pane chinangwa, kuti aone kuenzaniswa.
Carlo Ancelotti Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Sezvambotaurwa kare, Carlo akabva kumhuri yevarombo vasati vatanga mari yekubhadhara mari.
Mumwaka wake wokupedzisira neCentre, Ancelotti aifanira kudzokera kuItaly nguva dzose kuti ashanyire baba vake vane makore gumi nemana vainge vane utano husina kunaka nechirwere cheshuga nezvimwe nyaya. Panyaya iyi, akati, "Handina dambudziko rekutarisira boka racho nekuda kwechikonzero ichi. Zvakaoma, manzwiro, kana baba vako ... asi uhu hupenyu. Ndinofanira kuita zvandinokwanisa kuti ndigare pedyo naye, asi uku ndiko hupenyu. " Baba vake vakafa musi wa 29 September 2010, wekare 87. Carlo Ancelotti ane hanzvadzi inonzi Angela Ancelotti.
Carlo Ancelotti Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Champions League Success Story
Carlo Ancelotti anobata mishonga yegoridhe yeHNUMX UEFA Champions League.
Vaviri vake vokutanga vakauya apo akanga ari mutevedzeri we AC Milan, achikunda mutambo uyo akatumidzwa kuti European Cup kaviri kumashure kumashure kumashure kumashure kumashure kwe1989 uye 1990.
Sezvo maneja Ancelotti akakunda Champions League kaviri pamwe naMilan mu2003 uye 2007, uye zvakare ne Real Madrid gore rino rapfuura. Muchi1984 (kunyange zvisati zviri mumasikati pazuva) Ancelotti uye AS Roma vaiva chirango-vachibhururuka kubva pakukunda mutambo zvakare, asi pakupedzisira vakarasikirwa ne4-2 pazvikwangwani-kukwikwidza kuLiverpool mushure mekupedzisira kwe 1-1.
CHOKWADI KUTI: Tinoonga nekuverenga yedu Carlo Ancelotti Childhood Indaba pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.